Nhau - Musiyano Pakati Pemhepo Welded Pipe uye Yakarurama Welded Pipe
Musiyano Pakati Spiral Welded Pipe uye Straight Welded Pipe
Musiyano mukuru uripo pakati pemapombi maviri akasunganidzwa epombi yemhepo yakasungwa uye pombi yakatwasuka musiyano musiyano uri muchimiro chemoto.
Spiral welded pombi ndeye yakaderera kabhoni kabhoni simbi simbi kana yakaderera chiwanikwa dhizaini simbi tambo yakakungurutswa kuita chubhu isina chinhu neimwe helix angle (inonziwo angle angle), ndokuzosunganidzwa ikagadzirwa kuita pombi yakabatana, iyo inogona kushandisa yakatetepa simbi Kugadzirwa kwemapayipi akakura esimbi. Spiral welded pombi inonyanya kunonoka yakanyura arc yakasungwa pombi (SSAW), iyo inowanzo shandiswa mukuvaka kwakasiyana gasi mapaipi muChina. Tsananguro dzayo dzinoratidzwa ne "yekunze dhayamita * rusvingo ukobvu". Spiral dzakasungwa mapaipi dzakasarudzika-mativi akasungwa akasungwa uye maviri-mativi akasungwa akasungwa. Iyo welded pombi ichave nechokwadi chekuti iyo hydraulic bvunzo uye yakasimba tensile uye inotonhora kukombama kuita kweiyo weld zvinoenderana nemirau.
Iyo yakatwasuka musono yakasungwa pombi ndeye yakakwira-frequency yazvino uye napo napedyo mhedzisiro nhanho idzo dzinofanirwa kugadzirwa neiyo yakasungirirwa dura pamberi pechisimbi ichiumbwa nemuchina wekuumba, uye kumucheto kwetubhu isina chinhu inodziya uye yakanyungudika, uye yakasanganiswa pasi peimwe simba rinomanikidza, kutonhora kuumbwa. Iyo yepamusoro-frequency yakatwasuka musono yakasungwa pombi inoshandiswa mune iyo kumucheto kwepombi isina chinhu inonyungudika neiyo yepamusoro-frequency yazvino (ERW), iyo inonzi yakatwasuka musono yakanyudzwa arc welded pombi (LSAW) nekunyungudika neine arc yemagetsi.
Iko kusimba kwesimbi yakasungirirwa pombi inowanzo kuve yakakwirira kupfuura iyo yakatwasuka welded pombi. Iyo huru yekugadzira nzira yakanyudzwa mune arc welding. Iyo yemhepo yakatetepa pombi inogona kuburitsa yakatetepa mapaipi ane akasiyana mapaipi madhivhai nehupamhi hwakaenzana hwenzvimbo, uye zvakare inogona kuburitsa dzakasungwa mapaipi ane akakura madhaimendi ane akatetepa asina.
Iyo yekugadzira nzira yekutwasuka musono yakasungwa pombi iri nyore, kunyanya mukugadzira maitiro, ayo akapatsanurwa kuita epamusoro-frequency welded yakatwasuka musono yakasungwa pombi uye yakanyudzwa arc yakasungwa yakatwasuka welded pombi. Iyo yakatwasuka musono welded pombi ine yakakwira kugadzirwa kushanda, yakaderera mutengo uye inokurumidza kukura.
Nekudaro, ichienzaniswa neiyo yakatwasuka pombi yakasungwa pombi yehurefu hwakaenzana, iyo weld urefu inowedzerwa ne30 kusvika 100, uye yekumhanyisa kumhanya yakaderera. Naizvozvo, iyo diki dhayamita yakasungwa mapaipi anonyanya akatwasuka musoni yakasungwa, nepo hombe dhayamita yakasungwa mapaipi ari mazhinji anotenderera akasungwa.